Yintoni etshintshiweyo malunga nokubhloga kweShishini kule minyaka idlulileyo? | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 18, 2018 NgoLwesine, uJanuwari 18, 2018 Douglas Karr
Ukuba ubundilandela kule minyaka ilishumi idlulileyo, uyazi ukuba ndibhale Ukubhengezwa kweNkampani yeDummies umva ngo-2010. Ngelixa imbonakalo yemidiya yedijithali ibe notshintsho olukhulu kule minyaka isixhenxe idlulileyo, ndiqinisekile andizithembanga ukuba zininzi kakhulu iinguqu xa kusenziwa incwadi kunye neenkampani eziphuhlisa isicwangciso sokubloga esidibeneyo. Amashishini kunye nabathengi basalambele ulwazi olukhulu, kwaye inkampani yakho inokuba sisixhobo abasifunayo.
Ke ngoku yintoni etshintshileyo kwiBhlog yoShishino?
ukhuphiswano - phantse yonke inkampani isungula ibhlog yeshishini, amathuba okuba ilizwi lakho liviwe kwisihlwele mancinci… ngaphandle kokuba uthumela into ephawulekayo. Izithuba zebhlog kwiminyaka esi-7 eyadlulayo zazingamakhulu ambalwa amagama kwaye mhlawumbi zinomfanekiso omncinci kakhulu. Kule mihla, ividiyo kunye nemifanekiso ilawula umxholo obhaliweyo. Umxholo kufuneka uphandwe kakuhle kwaye ubhalwe ngcono kunaye nawuphi na umntu okhuphisana naye ukuba unethemba lokutsala izithuthi ezifanelekileyo kunye nokuguqulwa.
Ubuninzi -Abathengi kunye namashishini ngokufanayo bayacombulula, kuninzi kakhulu okuqulathiweyo komxholo oveliswayo kwaye awutyi. Sasihlala sijonga ukubhloga rhoqo njengomdlalo wamathuba-zonke iiposti zonyusa amathuba okuba umxholo wakho uya kufunyanwa, ujongwe, kwabelwane ngawo kwaye ubandakanyeke nawo. Kule mihla, siyakhula iilayibrari zomxholo. Ayisekho malunga nokuhamba kwakhona kunye nokuphindaphindeka, imalunga nokwakha inqaku elingcono kakhulu kunelo ukhuphisana nalo.
Media -Kunye ne-wordcount, ukujongwa komxholo kutshintshe kakhulu. I-bandwidth engenamda kunye neenketho zokusasaza zibeka iipodcast kunye neevidiyo ezandleni zakhe nabani na one-smartphone. Sizama ukuhambisa umxholo okhethekileyo kuyo yonke into ukufikelela kwizibonelelo ezifanelekileyo.
mobile -Kwanamashishini ethu abathengi be-B2B, sibona ukwamkelwa ngobuninzi kwabafundi abahambahambayo kuzo zonke iisayithi zabaxumi bethu. Ukuba nobuso beselfowuni obukhawulezayo, obuphendulayo, kunye nokubandakanya akusekho kunye nokukhetha.
Umakhi weWebhusayithi uphuhlise le infographic emangalisayo, The Imeko yoShishino lweBlogging kunye nesiKhokelo saBokuqala kwabaQalayo kwiNdlela yokwenza iBlog esihamba ngamaqonga ebhlogi eenkampani, amanani abafundi, indlela yokuziphatha kwabafundi, iingcebiso zokubhala, ukwabelana ngokwasentlalweni, kunye nokuguqula ukuqhuba kule infographic.
tags: 2017kublogakubloga kwequmrhuUkwabelana ngemidiya yoluntuimeko yokubhlogaumakhi wewebhu
Ngaba likho ixesha elingcono lokuSungula iNethiwekhi eNtsha yoLuntu?